Fiangonana ortodoksa koptan'i Aleksandria - Wikipedia
Fiangonana ortodoksa koptan'i Aleksandria
Ny Fiangonana ortodoksa koptan'i Aleksandria dia fiangonana ortodoksa tatsinanana, tsy kalkedoniana sady mahaleo tena. Isan'ny Fiangonan'ny konsily telo izy. Ny filohany dia atao hoe Papan'i Aleksandria sy Patriarkan'ny Toritenin'ny Masindahy Marka sy an'i Afrika manontolo, ka ao Kairo renivohitr'i Egipta no fonenany. Hatramin'ny taona 2012 dia i Tawadros II no Papan'io fiangonana io.
Katedraly ortodoksa kopta Abbasyia ao Kairo
Ity fiangonana ity dia mitory ny miafizisma izay tsy tokony hampitovizina amin'ny monofizisma: tsy manaraka ny fanapahan-kevitry ny Konsily tao Kalkedona izy noho ny antony momba ny tenim-pinoana (dogma) sy momba ny kanonan'ny Soratra Masina (lisitry ny boky ao amin'ny Baiboly) ary ara-politika.
Hatramin'izay ka hatramin'ny taona 1959 dia isan'io fiangonana io ny Fiangonana etiopiana ortodoksa izay nahazo ny patriarkany manokana tamin'io taona io.
Ny Fiangonana ortodoksa koptan'i Aleksandria dia fantatra koa amin'ny anarana hoe:
Fiangonana koptan'i Aleksandria;
Fiangonana ortodoksa kopta;
Fiangonana ortodoksan'i Egipta;
Fiangonana ortodoksa egiptiana.
Araka ny fomba fijery ofisialin'ny Fiangonan'i Aleksandria dia efa hatramin'ny andron'ny Aopostoly no nisian'io fiangonana io. Nizara ho sampana roa izy taorian'ny Konsily tao Kalkedona, ka ny ankamaroany namorona ny Fiangonana kopta ortodoksa ary ny sisa namorona ny Fiangonana grika ortodoksan'i Aleksandria (Fiombonana ortodoksa).
Araka ny lovantsofina samihafa izay tsikerain'ny mpikaroka amin'izao andro vaovao izao dia naorin'i Marka evanjelista io fiangonana io.
Tamin'ny 4 Novambra 2012 i Tawadros II na Teodora II izay nandimby an'i Chenouda III izay maty tamin'ny 17 Marsa 2012 teo amin'ny toerana maha Papa azy.
↑ Guillaume Bourin, « 5 raisons pour lesquelles Marc n'a pas fondé l'Église d'Alexandrie » 2014. in Le Bon Combat [tahiry]
↑ RTBF infos [tahiry]
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiangonana_ortodoksa_koptan%27i_Aleksandria&oldid=972248"
Dernière modification le 13 Jolay 2019, à 13:15
Voaova farany tamin'ny 13 Jolay 2019 amin'ny 13:15 ity pejy ity.